दैनिक पिउनुहोस् बदाम-दुध, मिल्नेछन् यस्ता फाइदा ! – live 60media
दैनिक पिउनुहोस् बदाम-दुध, मिल्नेछन् यस्ता फाइदा !
बदाम दुध पिउँदा जतिको स्वादिष्ट हुन्छ त्यति नै लाभदायक पनि हुन्छ। दुध र बदामकको पोषक तत्व स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ। बदाम वाला दुध पिउँदा दुधमा रहेका प्रोटिन, भिटामिन डी र क्याल्सियमको फाइदा त मिल्छ नै बदाममा हुने पौष्टिक तत्त्व जस्तै हेल्दी फ्याट, भिटामिन ई र भिटामिन बी १२ ले शरीरलाई भरपूर पोषण दिन्छ। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई मजबूत बनाउँछ।
जान्नुहोस् बदाम दुधका अचुक फाइदा…
प्री वोर्कआउट ड्रिंक
जो व्यक्ति दैनिक रूपमा जिम जान्छन्, उनीहरुले बदाम वाला दुध पिउनु निकै लाभदायक हुन्छ। यसको सेवनले शरीरका मांसपेशीहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। यसले यसलाई शरीरमा ऊर्जा पनि प्रदान गर्दछ।
स्वस्थ आँखाको लागि
दैनिक रूपमा बदाम वाला दुध पिउँदा आँखाको चमक बढ्छ। किनभने यसमा भिटामिन ए भरपूर मात्रामा हुन्छ जुन आँखाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
तेज दिमागको लागि
दिमागको लागि बदाम धेरै राम्रो मानिन्छ। बदाममा समावेश प्रोटीनले मस्तिष्क कोषहरूको मर्मत गर्दछ र मस्तिष्कको कार्यमा सुधार ल्याउँछ। यसको सेवनले तपाइँको स्मरण शक्ति, सोच्ने र निर्णय गर्ने शक्ति पनि बढ्छ।
वजन कम गर्न मद्दतगार
बदाम वाला दुधको सेवनले वजन कम गर्न पनि मद्दत गर्छ। त्यसैले, राति सुत्नु अघि बदाम मिलाएको दुध पिउनुहोस्। मनतातो दुध पिउँदा तनाव कम हुन्छ, आरामदायी निन्द्रा आउँछ र वजन पनि कम हुन्छ।
क्याल्सियमको अभावले धेरै व्यक्तिको हड्डी कमजोर हुन्छ। विशेष गरी, उमेर बढ्नुको साथै हड्डीलाई अधिक क्याल्शियम चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा, दैनिक रूपमा बदाम वाला दुध पिउनुपर्छ, जसले हड्डीहरू मजबूत बनाउँछ र शरीरको प्रतिरोध क्षमता पनि बढाउँछ।
स्वस्थ हृदयको लागि
बदाम-दुध सेवन गर्दा तपाईंको हृदय स्वस्थ रहन्छ। बादाम वाला दुधमा भिटामिन-ए र भिटामिन-ई पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। यी पोषक तत्वहरूले कोलेस्ट्रोलको स्तर नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ, जसको कारण हृदय स्वस्थ रहन्छ।
← शरीरका यी भागमा हुने कोठीले के संकेत गर्छ ? यो पढ्नुस् अनि तीन छक पर्नुस् !
टिका सानु र कृष्ण कंडेल विवाद बारे बोले चर्चित गायक राजु परियार : इन्द्रेणीलाई पुजा गर्नु पर्छ टिकाले (भिडियो) →